Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpanolotsain’ny filohampirenena: Mpanampatra fahefana amin’ny tanim-bahoaka
Mpanolotsain’ny filohampirenena: Mpanampatra fahefana amin’ny tanim-bahoaka
Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny trano fandraisam-bahiny « Louvre » etsy Antaninarenina omaly ny Komity teknika ara-toekarena sy ara-bola (Ctef) tarihin’i Joseph Yoland. Ny fampidirana ao anatin’ny Lalàmpanorenana ny foto-kevi-dehiben’ny fampandrosoana ara-toekarena no isan’ny notakian’ity komity ity. Midika aloha izany fa ilaina ny fanitsiana ny Lalàmpanorenana na fandrafetana Lalàmpanorenana vaovao.
Inona moa io foto-kevi-dehiben’ny fampandrosoana ara-toekarena nofaritan’ny « Ctef » io ? Ny fiarovana ny harem-pirenena mba hahafahana miantoka ny fanavotam-pirenena ka hirosoana amin’ny fanarenana sy fampivorana ny toekarena, hiantohana ny fiarenam-piainan’ny vahoaka.
« Ny volamena », hoy ry Joseph Yoland, « dia tsy tokony aondrana any ampita intsony fa angonina sy tehirizina ao amin’ny Banky Foiben’ny Repoblikia ka iny no miantoka ny fiakaran’ny sandan’ny vola malagasy « ariary ».
« Ny harem-pirenena hafa kosa dia tsy aondrana manta fa aodina eto vao miondrana », hoy izy. Ny akon’izay dia ny tsy maintsy ananganana orin’asa manodina izany eto, izay isan’ny mamorona asa sy mampiakatra ny sandan’ilay akora.
Ny Malagasy no mamaritra ny anjaran’ny orin’asa tsy miankina izay mitrandraka ireny harena eto ireny, na teratany Malagasy ihany no mitantana izany na vahiny, fa tsy azo ekena raha isika vahoaka malagasy izay tompon’ny harena no tsy hahazo afa-tsy 1 na 2% amin’ny vokatra ao, hoy ihany ny « Ctef »
Isan’ny nasian’ny « Ctef » fanamarihana koa ny maha-zava-dehibe ny iarovana ny orin’asa malagasy ka tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny fitondram-panjakana. Eo ny fanaraha-maso hentitra ireo entana miditra eto Madagasikara izay mety hamono ny vokatra etso an-toerana. Misy fepetra azo ampiharina momba izany, hoy ry Joseph Yoland. “Eo ny tsy famelana ny entana avy any ivelany miditra eto rehefa tsy manaraka ny fenitra takian’ny maha-entam-barotra azy”, hoy ihany izy. Ny fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly dia iray amin’ny fepetra takian’ny fiarovana ny orin’asa Malagasy satria mifototra amin’ny kolikoly ny fahafahan’ny entana afaran’ny vahiny sasany sy mpandraharaha Malagasy sasany mitobaka eny amin’ny tsena eto an-toerana.
Tokony hojerena maika koa ny pôlitikam-pirenena momba ny hetra satria dia isan’ny sakana tsy ananan’ny mpandraharaha misehatra amin’ny asa fihariana eto izy io, hoy ny “Ctef”.
Fa isan’ny nitondran’ity Komity ity fanazavana koa omaly ny olana momba ny fananan-tany eto Madagasikara. Iray amin’ny faritra tena anjakan’ny mpanam-bola manjakazaka sy milalao ny tompon’andraiki-panjakana amin’ny vola i Nosy Be. Niteny tamin’ny maha-mpanolotsainan’ny tanàna any Nosy Be Hell Ville azy i Joseph Yoland tamin’ity teboka momba ny tany ity omaly.
“Lasan’ny vahiny amin’ny fomba mahagaga ny velaran-tany an-jatony hekitara any Nosy be”, hoy izy. “Taratasy tsy mazava fa toa mifono kolikoly no nahazoan’ireny vahiny ireny ny tany”, hoy izy. “Misy mpanolotsainan’ny filohampirenena koa isan’ny nahazo velaran-tany tamin’ny fomba mampiahiahy”, hoy hatrany i Joseph Yoland. Raha ny fepetra takian’ny lalàna hahazoan’ny olom-pirenena tsotra misitraka tany tsy fanta-tompo iray no ifotorana, dia misy ny fanamaintisamolaly mandritra ny 20 taona ngarangidina izany, ary voaporofon’ny fokonolona izany. Tao anatin’ny hatsaran-toetra (bonne foi) no nanaovany izany, ary didim-panjakana no manamarina izany farany. Ity mpanolotsainan’ny filohampirenena ity anefa tsy nahafeno akory an’izany fepetra rehetra izany, ary ireo vahoaka niasa sy namokatra, nanamaintimolaly an’ilay tany ampolon-taonany maro indray no voaroaka sy lasa tompony mangataka ny atiny, hoy izy.
Efa nisy hatrany ny fanapahan-kevitra noraisan’ny filan-kevitra monisipaly nisakana ny momba ireny raharaha mampiahiahy momba ny fananan-tany na fahazoan’olona tsy fanta-piaviana tany any an-toerana ireny, ary efa nandefasana tatitra momba izany mba handraisana fepetra taty amin’ny fitondram-panjakana foibe, fa tsy nisy akony hatramin’izao, hoy i Joseph Yoland. Ka tsy ny vahoaka amin’izay ve no tokony handray fepetra ny amin’izany e ?